Ulimisa kanjani qingqo ibhizinisi lakho, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
KULE ngosi ngithanda sikhulume ngendaba esengake ngayibeka kulezi zithebe yokubaluleka kokuqinisa izinhlaka zebhizinisi lakho ukuze lingazitholi selifadalala eminyakeni ezayo, loku phecelezi okuthiwa future-proof your business.
Wonke umuntu uyabona ukuthi itshe seligaya ngomunye umhlathi ekulawuleni nasekuphatheni amabhizinisi emhlabeni wonke. Sike saluphatha lolu daba lokuthi kubalulekile uma ungusomabhizinisi ukuthi uke uthathe isikhathi ubheke zonke izingxenye ezakha ibhizinisi lakho, ubuke ukuthi yiluphi ushintsho olungase lwenzeke ezinyangeni noma eminyakeni ezayo olungase luphazamise ibhizinisi lakho.
Okokuqala engake ngakubeka wukuthi uma ibhizinisi lakho lingekho kwezobuchwepheshe noma ezinkundleni zokuxhumana lifana nebhizinisi elifile. Kahle hle kufanele uvele ukhohlwe ukusimama kwalo ngomuso. Ngisho ngabe awuzwani kangakanani nobuchwepheshe noma izinkundla zokuxhumana kodwa kufanele uziphoqe ukuthi uzithande noma uqashe abantu abanolwazi olunzulu mayelana nezinto eziphathelene nabo.
Uma ngingenza isibonelo nje, ezobuchwepheshe zifana ncamashi nakudala lapho abantu ababehlala emakhaya babeya emfuleni beyokha amanzi, beyophuzisa izinkomo, beyogeza noma beyowasha.
Yilapho-ke umphakathi wawuthola khona ithuba lokucobelelana ngolwazi nangezinto eziningi ezimayelana nesikompilo lwabantu. Empeleni, yilapho abantu bebehlanganela khona. Ngakho-ke wonke umuntu wayazi ukuthi uma efuna ukuthola izindaba zomphakathi noma insizwa ifuna ukweshela, iyazi ukuthi intombi ethile iyoyithola nini futhi kanjani.
Singasho sithi umfula wamanje wubuchwepheshe nezinkundla zokuxhumana. Uma ufuna amakhasimende kufanele ube yingxenye yezinkundla zokuxhumana; yilapho uzowathola khona. Yisemfuleni wesimanje.
Akusizi ukuqinisa ikhanda ukuthi wena uzosebenzisa enye indlela yokuxhumana namakhasimende engaphandle kwezinkundla zokuxhumana kodwa iningi labantu obafunayo libe lilapho.
Okwesibili, kufanele uzifundise indlela yokuxhumana namakhasimende akho ngendlela azokuzwa ngayo. Abanye osomabhizinisi abazihluphi ngokuzifundisa izindlela zokuxhumana kahle namakhasimende abo. Bacabanga ukuthi bakhuluma namakhasimende abo kanti lutho bashaya eceleni.
Yebo, ungaba nawo umyalezo ofuna ukuwudlulisela kubantu kodwa umbuzo wukuthi uwudlulisela kubantu okuyibona yini?
Yingakho-ke kubalulekile ukwenza i-targeted marketing. Ngale ndlela wenza isiqiniseko sokuthi ukhuluma ngqo nokufanele bawuzwe noma bawubone lowo myalezo.
Ungafani nomuntu odunguza ebumnyameni bese eba nethemba lokuthi uzonemba enyameni. Khumbula ukuthi njengoba sisebenzisa ezobuchwepheshe ngezindlela eziningi, izinkundla zokuxhumana nezobuchwepheshe ziqoqa nemininingwane yazo zonke izinto esizithandayo noma esikhuluma ngazo kulezi zinkundla.
Loku kwenza kube lula ukuthi uma uthumela umyalezo uye eqoqweni labantu abadla ngandawonye.
Okwesithathu, kubalulekile ukuthi uzifundise ukusebenzisa i-cloud storage ukubeka “efwini” yonke imininingwane emayelana nebhizinisi. Kwenza kube lula ukuthi noma uyaphi nomhlaba uyokwazi ukuthi usebenze lapho ngoba lapho uya khona nemininigwane yakho yebhizinisi iyohlale ikhona. Ngeke ube nenkinga yokuthi uma ulahlekelwe yiselula noma i-tablet yakho noma ikhompyutha uzithole usenkingeni yokuthi konke kushabalele.
Okwesine, i-Internet of things, okusho zonke izinto ezimayelana nobuchwepheshe nokuthi zisebenzelana noma zisebenzisana kanjani.
Yonke into ixhumene, bonke ubuchwepheshe buyaxhumana, ngakho asisekho isidingo sokuthi uhambe untanta yonke indawo uzama ukwenza izinto zebhizinisi zihlangane noma zisebenziselane. Okumele ukwenze wukuthi uqonde kabanzi ukuthi yiziphi izinto zobuchwepheshe ezenza ibhizinisi lakho lisebenze kangcono bese ubheka ukuthi yiziphi izinto zobuchephweshe ezingase ziliphazamise.
Loku kwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlale uhamba phambili ngasekuhambisaneni nobuchwepheshe, ungasali ngemuva.
Kuye kudabukise ukuthola noma ukubona ukuthi iningi losomabhizinisi aliqwebukile ngezinto ezenzeka endimeni yebhizinisi ezikulo. Yingakho sibona amanye amabhizinisi ewa ngoba abaningi balele.
UBiyela wumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting